Ngabe uNurkovic angayisindisa iChiefs? | Scrolla Izindaba
Ngabe uNurkovic angayisindisa iChiefs?
Ngabe uSamir “Kokota” Nurkovic angaba ngumsindisi we-Kaizer Chiefs aqede nesomiso samagoli saMakhosi? UNurkovic unezimfanelo ezilahlekele umqeqeshi uGavin Hunt we-Chiefs.
Amandla alo mgadli namagoli ayi-14 awashaye ngesizini edlule kuyakhuluma. Kodwa umdlali wasemuva we-Chiefs, uRamahlwe Mphahlele, uthe ukwehla kweqembu muva nje ngeke kulungiswe nguNurkovic yedwa.
UNurkovic akakaze abonakale kunoma yimiphi imidlalo ye-Chiefs kule sizini ngenxa yokulimala.
“Asikwazi ukufaka ingcindezi kuSamir. Yebo, sijabule ukuthi ubuyile kodwa ngeke silindele ukuthi angene azosilethela amagoli. Siyawazi amakhono kaSamir kodwa asikwazi ukubeka wonke umthwalo kuye. Kunabanye abadlali abakwaziyo ukushaya amagoli,” uMphahlele.
NgeSonto lo mdlali wase-Serbia uhambe naMakhosi baya e-Angola lapho bezobhekana ne-Premiro de Agosto ngoLwesibili ntambama. Lo mdlalo womlenze wokuqala wesibili we-CAF Champions League uzoba se-Estadio 11 de Novembro ngehora lesihlanu ntambama ngesikhathi saseNingizimu Afrika.
Umlenze wokuqala uphele ngeqanda eqandeni enkundleni yezemidlalo i-FNB e-Soweto emasontweni amabili edlule. Ozonqoba kusasa uzodlulela esigabeni samaqoqo alo mncintiswano.
UMphahlele, obegqoke ibhande lobukaputeni engekho u-Itumeleng Khune emlenzeni wokuqala, uzwakalise ukubaluleka kokuqala unyaka omusha ngokuwina.
“Siyazi ukuthi bekufanele siwunqobe kalula umlenze wokuqala ngamagoli amathathu noma amane. Kodwa akwenzekanga futhi manje silapha. Siyakudinga kabi lokhu kunqoba ngoba siyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuqala unyaka omusha ngenothi elihle.
“Futhi sizimisele ngalo mqhudelwano. Iqembu alikaze lidlulele esigabeni samaqoqo kulo mqhudelwano futhi sifuna ukukuqeda lokho. Umqeqeshi uzimisele ngokuhamba ibanga elingaphezulu emncintiswaneni nathi kanjalo,” kusho uMphahlele.
UMphahlele kungenzeka abuye abe ukaputeni weqembu kusasa ngemuva kokuthi uKhune noWillard Katsande besale ekhaya. UDaniel Akpeyi noBruce Bvuma bangonozinti ababili uHunt ahamba nabo.
Kwezinye izindaba, abaphikisi izimbangi ze-Orlando Pirates ku-CAF Confederation Cup i-Sagrada Esperanca sebehoxile kulo mqhudelwano. Umdlalo womlenze wesibili bewuhlelelwe uLwesithathu enkundleni yezemidlalo i-Johannesburg, kodwa iqembu lase-Angola selinqume ukungahambi, becaphuna ubhabhane lwe-COVID-19.
AmaBhakabhaka, anqobe umlenze wokuqala ngegoli elilodwa eqandeni, manje azongena ngqo kuma-play-offs ukuze azibekisele indawo kumaqoqo e-Confederation Cup, lapho ezodlala khona nowehlulekile emdlalweni wokugcina wokuhlungela amaqoqo e-Caf Champions league. Umdlalo wama-play-offs kulindeleke ube mhla ziyi-17 kuMasingana.